--- Quote ---"Waxaan qoorahayga ku arkay cuncun siyaado ah oo aan xoqis kala daalay illaa maqaarka uu fiiqmo, waxayna iigu daran tahay markaan dhidido ama dhar igu dhaggan xirto maalintaas, waxaan kaloo arkayay in duf cad ka kacayso maqaarka qoorahayga markaan aad u xoqo, wax nabro ahne ma lihi, marka dhakhtarow arintaan maxay noqon kartaa?!"
* Cuncun siyaado ah
* Mararka qaar furuuruc ka muuqdo qooraha iyo hareerihiisa.
* Maqaarka oo qolof dhacsado markii la xoqo.
* Inta cuncunka kaa hayo oo midabkeedu isbadalo illaa bowdyaha.
* Dharka lagu jimicsado ama lagu dhidido ha qaadan dhowr jeer oo isku xigxiga.
* Dacas la'aan ha galin musqulaha la isla isticmaalo iyo meelaha lagu qubeysto markii dabaasha laga soo baxo.
* Qof hala wadaagin shukumaannada iyo marooyinka lagu tirtirto.
* Haddii aad xaas tahay, iska hubi in lamaanahaadu aysan qabin caabuqa fangaska ee xubnaha taranka.